Add-ons – Tagged "MZD" – ICT.com.mm
Nut Whole-Meal Mix Nut Rusk 200g (3pc)K4,478
Nut House Cashew Garlic Cheese Rusk 200g (3pc)K4,478
Nut House Cashew Salar Rusk 200g (3pc)K4,478
Nut House Mix Berries Cashew Rusk 200g (3pc)K4,478
Nut House Cashew Butter Rusk 200g (3pc)K4,478
Nut Whole-Meal Mix Nut Rusk 200g (3pc)
နွားနို့နှင့်ထောပတ် အချိုးကျ ရောစပ်ပြုလုပ်ထားသော ပေါင်မုန့်ချောင်းများအား သီဟိုဠ်စေ့မှုန့်၊ အစေ့စုံ၊ ကြက်ဥ၊ ဟင်းရွက်ဆီ ရောစပ် ဖျန်းပက်ပြီး Ovenတွင် နှစ်ခါပြန်၍ ဖုတ်ထားသော ကြွပ်ကြွပ်ရွရွ အစေ့စုံကျန်းမာရေး မုန့်ကြွပ်ဖြစ်ပါသည်။ သကြားလျော့မုန့် နှစ်သက်သူများ၊ Whole-Meal (ဂျုံကြမ်း) မုန့် နှစ်သက်သူများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
Nut House Cashew Garlic Cheese Rusk 200g (3pc)
နွားနို့နှင့်ထောပတ် အချိုးကျ ရောစပ်ပြုလုပ်ထားသော ပေါင်မုန့်ချောင်းများအား သီဟိုဠ်စေ့မှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူမှုန့်၊Cheese မှုန့်၊ ကြက်ဥ၊ အိုင်အိုဒင်းဆားများ ရောစပ် ဖျန်းပက်ပြီး Ovenတွင် နှစ်ခါပြန်၍ ဖုတ်ထားသော ကြွပ်ကြွပ်ရွရွ သီဟိုဠ်စေ့ ထောပတ်မုန့်ကြွပ်ဖြစ်ပါသည်။
Nut House Cashew Salar Rusk 200g (3pc)
နွားနို့နှင့်ထောပတ် အချိုးကျ ရောစပ်ပြုလုပ်ထားသော ပေါင်မုန့်ချောင်းများအား သီဟိုဠ်စေ့မှုန့်၊ ပဲပိစပ်ဆီ၊ ကြက်ဥ၊ အိုင်အိုဒင်းဆားများ ရောစပ် ဖျန်းပက်ပြီး Ovenတွင် နှစ်ခါပြန်၍ ဖုတ်ထားသော ကြွပ်ကြွပ်ရွရွ သီဟိုဠ်စေ့ ဆာလားမုန့်ကြွပ်ဖြစ်ပါသည်။ ပဲပိစပ်ဆီစစ်စစ်ကိုသာ အသုံးပြုထားပါသည်။
Nut House Mix Berries Cashew Rusk 200g (3pc)
နွားနို့နှင့်ထောပတ် အချိုးကျ ရောစပ်ပြုလုပ်ထားသော ပေါင်မုန့်ချောင်းများအား ဘယ်ရီEssence၊ သီဟိုဠ်စေ့မှုန့်၊ စပျစ်သီးခြောက် ရောစပ် ဖျန်းပက်ပြီး Ovenတွင် နှစ်ခါပြန်၍ ဖုတ်ထားသော ကြွပ်ကြွပ်ရွရွ သီဟိုဠ်စေ့ ဘယ်ရီမုန့်ကြွပ်ဖြစ်ပါသည်။
Nut House Cashew Butter Rusk 200g (3pc)
CBR (200g) ထောပတ်မုန့်ကြွပ် နွားနို့နှင့်ထောပတ် အချိုးကျ ရောစပ်ပြုလုပ်ထားသော ပေါင်မုန့်ချောင်းများအား သီဟိုဠ်စေ့မှုန့်၊ ထောပတ်ဆီ၊ ကြက်ဥ၊ အိုင်အိုဒင်းဆားများ ရောစပ် ဖျန်းပက်ပြီး Ovenတွင် နှစ်ခါပြန်၍ ဖုတ်ထားသော ကြွပ်ကြွပ်ရွရွ သီဟိုဠ်စေ့ ထောပတ်မုန့်ကြွပ်ဖြစ်ပါသည်။ထောပတ်ဆီစစ်စစ်ကိုသာ အသုံးပြုထားပါသည်။
Munchy’s Crackers Cream Crackers deliciously baked and made easier than ever! Shaped & sized to perfectly fit your mug, have more fun with no need for breaking and less crumbs....
Enjoyafeel good snack that loves you back! A light and crispy cracker, baked to be the perfect savoury snack. ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ နေရာမရွေး စားသုံးဖို့အဆင်ပြေတဲ့ Munchy’s Vege Cracker မုန့်ဖြစ်ပါတယ်။ Vege Cracker...
Munchy's Sugar Cracker 390gm (12pcs)
Enjoy simple pleasures withacracker that is coated in sugar for the sweetest experience. အချိုကဲတဲ့အရသာကို နှစ်ခြိုက်သူတွေအတွက် ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ Munchy’s Sugar Cracker မုန့်ဖြစ်ပါတယ်။ သကြား Cracker ဖြစ်တဲ့အတွက် Cracker ပေါ်မှာ အချိုအရသာထူးကဲတဲ့ သကြားကို ဖုံးအုပ်ပေးထားပါတယ်။...
Munchy's Assorted Funmix 700gm (6pcs)
Spice things up with Munchy’s FUNMIX. It’satreasure chest of unlimited fun that never gets boring! ထူးကဲတဲ့ အနံ့အရသာ၊ မတူညီတဲ့အရွယ်အစားပုံစံနဲ့ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ ကွတ်ကီးအမျိုးမျိုးကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Munchy’s Assorted Funmix မုန့်ထုပ် (700 gm) ဖြစ်ပါတယ်။...
Munchy's Assorted Funmix 295gm (12pcs)
Spice things up with Munchy’s FUNMIX. It’satreasure chest of unlimited fun that never gets boring! ထူးကဲတဲ့ အနံ့အရသာ၊ မတူညီတဲ့အရွယ်အစားပုံစံနဲ့ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ ကွတ်ကီးအမျိုးမျိုးကို ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Munchy’s Assorted Funmix မုန့်ထုပ် (295 gm) ဖြစ်ပါတယ်။...
Munchy's Assorted Topmix 700gm (6pcs)
There’s no need to settle for just one. Treat yourself toavariety of Munchy’s best biscuits, all in one TOPMIX bag! တမူထူးခြားတဲ့အနံအရသာ၊ အရွယ်အစားပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ ဘီစကစ်မုန့်တွေကို ပေါင်းစပ် ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ Munchy’s Assorted...
Munchy's Assorted Topmix 295gm (12pcs)
Flavor: Chunky Hazelnut Qty: 12pcs အုတ်ဂျုံနဲ့ သစ်အယ်သီးကို အခြေခံပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Munchy’s Oat Krunch Chunky Hazelnut မုန့်ထုပ် (208gm) ဖြစ်ပါတယ်။ အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံသလို အာဟာရပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်တဲ့ Oat Krunch မုန့်ဖြစ်ပြီး အရေအတွက် ၁၂ ခု ပါဝင်ပါတယ်။ OAT...
Flavor: Strawberry & Blackcurrant Qty: 12pcs အုတ်ဂျုံနဲ့အတူ စတော်ဘယ်ရီနဲ့ စပျစ်ညိုတို့ကို ပေါင်းစပ်အခြေခံပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Munchy’s Oat Krunch Strawberry & Blackcurrant မုန့်ထုပ် (208gm) ဖြစ်ပါတယ်။ အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံသလို အာဟာရပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်တဲ့ Oat Krunch မုန့်ဖြစ်ပြီး အရေအတွက် ၁၂...
Flavor: Chocolate Qty: 12pcs အုတ်ဂျုံနဲ့အတူ သစ်စေ့သစ်ဆံနဲ့ ပြင်းရှတဲ့ချောကလက်တို့ကို ပေါင်းစပ်အခြေခံပြီးမှ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Munchy’s Oat Krunch Dark Chocolate မုန့်ထုပ် (208gm) ဖြစ်ပါတယ်။ အနံ့အရသာနဲ့ ပြည့်စုံသလို အာဟာရပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်တဲ့ Oat Krunch မုန့်ဖြစ်ပြီး အရေအတွက် ၁၂ ခု ပါဝင်ပါတယ်။ OAT...
Munchy's LEXUS Vegetable Calcium Cracker 200gm (12pcs)
Flavor: Vegetable Calcium Cracker Qty: 12pcs လွယ်လွယ်ကူကူ သယ်ဆောင်သွားလို့ရပြီး အလွယ်တကူသုံးဆောင်နိုင်တဲ့ Munchy’s LEXUS Vegetable Calcium Cracker မုန့်ထုပ် (200g) ဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ Cracker ထဲမှာ ချိုမြိန်မွှေးပျံ့အရသာရှိတဲ့ Vegetable Calcium ကို ပေါင်းစပ်ပေးထားတာကြောင့် အသီးအရွက်နှစ်ခြိုက်သူတွေ အကြိုက် ဖြစ်ပါတယ်။ အရေအတွက်...
Munchy's LEXUS Peanut Butter Cream Sandwich 190gm (12pcs)
Flavor: Peanut Butter Qty: 12pcs Your days are packed, your to-do lists longer than your monthly grocery list. Somewhere in between your kids’ classes, work and chores lie little moments...
Flavor: Cheese Qty: 12pcs လွယ်လွယ်ကူကူ သယ်ဆောင်သွားလို့ရပြီး အလွယ်တကူသုံးဆောင်နိုင်တဲ့ Munchy’s LEXUS Cheese Cream Sandwich မုန့်ထုပ် (190gm) ဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ မုန့်ထဲမှာ ချိုမြိန်မွှေးပျံ့တဲ့ အနံ့အရသာနဲ့ Cheese Calcium ကို ပေါင်းစပ်ပေးထားတာကြောင့် ချိစ်အရသာ နှစ်ခြိုက်သူတွေ အကြိုက်တွေ့မှာပါ။ အရေအတွက် ၁၂ ခုပါဝင်ပါတယ်။...
Munchy's LEXUS Chocolate Cream Sandwich 190gm (12pcs)
Flavor: Chocolate Qty: 12pcs လွယ်လွယ်ကူကူ သယ်ဆောင်သွားလို့ရပြီး အလွယ်တကူသုံးဆောင်နိုင်တဲ့ Munchy’s LEXUS Chocolate Cream Sandwich မုန့်ထုပ် (190gm) ဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ မုန့်ထဲမှာ ချိုမြိန်မွှေးပျံ့တဲ့ အနံ့အရသာနဲ့ Chocolate Cream ကို ပေါင်းစပ်ပေးထားတာကြောင့် ချောကလက်အရသာ နှစ်ခြိုက်သူတွေ အကြိုက်တွေ့မှာပါ။ အရေအတွက် ၁၂ ခုပါဝင်ပါတယ်။...
Shin Shin Original Flavor (30 PCs)
Brand: Shin Shin Flavor: Original Flavor Type: Instant Rice Vermicelli 30 PCs per 1 Pack Weight: 1.65 Kg Ingredients: Instant vermicelli cake Rice, Modified Tapioca Starch Flavour Powder Ingredients: Salt,...